Ọdịiche dị iche iche nke ikuku ikuku | Network Meteorology
N'ụbọchị, ọdịiche dị na okpomọkụ ha pere mpe karịa n’oké osimiri karịa ka ha dị n’elu ala. Na mgbanwe diurnal nke oke mmiri mmiri dị n'elu mmiri n'ozuzu na-erughị otu ogo na, ya mere, ikuku ikuku dị n'akụkụ oke osimiri nwere obere mgbanwe mgbe ọ dị jụụ.
N'ụzọ dị iche, maka mpaghara ọzara nke dị n'ime ime kọntinent, ikuku ikuku nwere ike ịdị iche site na ogo 20 n'etiti ehihie na abalị. Na nso oke osimiri, mgbanwe a na ọnọdụ okpomọkụ na-adabere nke ukwuu na ntụzi aka nke ifufe: njupụta nke mgbanwe a kara akara nke ọma ma ọ bụrụ na ifufe si na ala abịa, mana ọ ga - esighi ike ma ọ bụrụ na ifufe si n'oké osimiri. Oke ala na oke osimiri di kwa oku na-agbadata Ọnọdụ ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche.
Dị ka iwu n'ozuzu, mgbe udo dị, a na-akawanye iche mgbanwe dị iche iche na mbara igwe dị elu. Ọ bụrụ na ikuku dị, ikuku na-akpalite na oke oke ọkpụrụkpụ, yabụ ọnụọgụ ọnọdụ ọkụ nwere ike ibelata. Igwe ojiiN'aka nke ọzọ, ọ na-ebelata njupụta nke mgbanwe dị iche iche na ọnọdụ okpomọkụ site n'igosipụta radieshon nke anyanwụ ma ghara iru ala, ma n'abalị igwe ojii na-eme dị ka "mkpuchi" maka elu iji jụụ.
Ọdịdị dị elu nke ụwa na-emetụtakwa ọdịdị nke ọdịdị ụwa na arụmọrụ thermal nke na-akpata oyi akwa. N'otu aka ahụ, ọdịdị nke ala gbara ya gburugburu dị mkpa, ebe ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ nke ebe a ga-agbanwe site na ikuku ikuku na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ikuku oyi nke na-esi n'akụkụ ndị dị gburugburu.
La mmetụta gburugburu ebe obibi gbara ya gburugburu pụtara ìhè na nnukwu obodo. N’abalị ihu igwe gbachapụrụ agbachapụ ma dị jụụ, ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ a na-ede n’etiti obodo pụrụ ịgafere S * C ndị a na-ahụ n’ebe dị nso na mbara ala. N'ụbọchị, okpomọkụ nke ụlọ ndị dị n'obodo ahụ na-arụ na-emetụta ụdị okpomọkụ ọ bụla na ụdị ọrụ niile a na-eme ebe ahụ.
Ozi ndị ọzọ - Mmekọrịta dị n'etiti okpomọkụ na okpomọkụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Diurnal mgbanwe nke elu ikuku okpomọkụ
Ihu igwe jọrọ njọ, kedụ ihe m ga-eme, enweghị m nche anwụ !!
Ebe ọdụ ụgbọ elu, maka ndị na-akwado ihu igwe